Fampitahana: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Mendrika izany ve? | Vaovao momba ny gadget
Fampitahana: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Mendrika izany ve?
Mifanaraka amin'ny fanendrena azy isan-taona, ny orinasa Aziatika dia nanangana ny andiany Huawei P40 vaovao, eto dia nanao unboxing sy ny fiheverana voalohany momba ny Huawei P40 Pro vaovao izahay ary ankehitriny dia tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny kinova taloha ho jereo hoe ohatrinona ny lanjan'ilay fanovana. Noraisinay ny Huawei P40 Pro vaovao sy ny Huawei P30 Pro teo aloha ary napetrakay nifanatrika izy ireo hahitana raha tena mendrika ny fanovana tokoa izany, Te hahafantatra ve ianao raha safidy tsara ny Huawei P40 Pro raha oharina amin'ny teo alohany? Aza adino ny fampitahantsika farany.
1 Volavola: fanavaozana ilaina nefa amin'ny fotony
3 Ny fakantsary: ​​ny teboka lehibe dia efa ampahany
4 Fizarana haino aman-jery sy fifandraisana
5 Fahaleovan-tena, izay mamirapiratra koa Huawei
Volavola: fanavaozana ilaina nefa amin'ny fotony
Samy miorina amin'ny fotony metaly voahosotra fonosina vera izy roa na eo ivohony na eo alohanyo Huawei dia nanisy fikasihana kely tamin'ny famolavolana izay nahafahana nanao izany, raha tsy very ny votoatin'ny P Series, dia mahita fahasamihafana miavaka isika mba hahafahana manavaka modely iray amin'ny iray hafa, kely indrindra. Ary toy izao no itovizan'ny fitaovana roa sy ny fahasamihafana amin'ny fotoana mitovy, raha ny marina, ny Huawei P40 Pro vaovao dia nahazo antsasaky ny milimetatra sy folo grama raha ampitahaina amin'ny andiany teo aloha:
Huawei P40 Pro: 158,2 * 72,6 * 8,95mm ho an'ny 203 grama
Huawei P30 Pro: 158 * 73,4 * 8,4mm ho an'ny 192 grama
Amin'izany fomba izany no ny fahasamihafana lehibe amin'ny famolavolana izay hitantsika dia mifototra amin'ny fitomboana kely amin'ny tontonana eo aloha izay mahazo curvature ihany koa amin'ny faritra ambony sy ambany, tsy amin'ny lafiny fotsiny toy ny teo aloha; Ny fidinana karazana "notch" dia narahin'ny fakan-tsary indroa (sary + IR) eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery; Ny modely any aoriana, na dia manana tanjona mitovy aza, dia misongadina kokoa sy lehibe kokoa ankehitriny; Ary farany, avelantsika ireo sisiny fisaka hiatrehana fefy izay mihodina tanteraka amin'ny sisiny rehetra.
Amin'ity dia afaka milaza isika fa ny P30 Pro sy ny P40 Pro dia tena mitovy, noho izany, ireo fitaovana roa ireo dia mametraka ilay solosaina manokana an'ny orinasa sinoa, Kirin 990 ny fahombiazan'ny voaporofo sy ny fahombiazany. Ho azy ireo dia samy manana ihany koa ireo fitaovana roa ireo RAM 8GB ary ny uncheck voalohany dia hita ao amin'ny 256 GB fitehirizana entana ho an'ny Huawei P40 Pro, Raha tamin'ny fotoana nanombohan'ny P30 Pro tamin'ny 128GB, eny, samy manana ireo fitaovana roa ireo fahatsiarovana mivelatra Amin'ny alàlan'ny karatra fananan'i Huawei, hametraka ny fetra amin'izany izahay.
Izany no mahatonga an'ireo fitaovana roa ireo, araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary, nahita fahombiazana mitovy amin'izany izahay. Ity dia loka lehibe ho an'ny P30 Pro, izay efa fitaovana nialoha ny fotoany tamin'ny androny. Mahaliana amin'ny lafiny iray hafa fa na eo aza ny fihazakazahana avo kokoa sy ny tahan'ny haingam-pandeha avo lenta, ny P40 Pro dia mbola manao asa somary haingana kokoa (ohatra amin'ny horonantsary) noho ny Huawei P30 Pro, noho izany ny rindrambaiko sy ny fanatsarana teknika sasany dia tsy maintsy ao anatiny. Na izany aza, ny fitaovana roa dia manana hery lehibe.
Ny fakantsary: ​​ny teboka lehibe dia efa ampahany
Tahaka ny nitranga tamin'ny androny niaraka tamin'ny Huawei P30 Pro, ity P40 Pro vaovao ity dia te hametraka ny fototr'izany amin'ny fakana sary an-tariby finday, azo zahana amin'ny fomba rehetra ny fahasamihafana, ary izany dia mandeha lavitra amin'ny fivoaran'ny sary ny herintaona. nitranga Tamin'izany fotoana izany, ity Huawei P40 Pro no mpitarika amin'ity faritra ity. Mazava ho azy, samy manana sensor efatra manana ny maha izy azy izy ireo saingy samy hafa ny kalitaony.
Huawei P40 Pro: 50MP Standard - 40MP Ultra Wide Angle - Lensa telefaona 8MP 5x - OIS + AIS + ToF Sensor
Huawei P30 Pro: 40MP Standard - 20MP Ultra Wide - 8MP 5x Telephoto - OIS + ToF Sensor
Ho azy ireo, ireo fitaovana roa ireo dia manana fakantsary selfie 32MP, na dia somary malalaka kokoa aza ny zoro natolotry ny fakantsary anoloana an'ny Huawei P40 Pro. Na izany na tsy izany dia hitantsika ny famaritana bebe kokoa amin'ny sary rehetra an'ny Huawei P40 Pro, izay misy ny hery ampitovina kely dia eo amin'ny mason'ny telephoto mahafinaritra an'ireo fitaovana roa ireo, na dia nahatratra fiakarana bebe kokoa aza izahay tao amin'ilay kinovan'ny P40 Pro. Eto ambany eto ambany ny fampitahana, ireto sary manaraka ireto dia nalaina niaraka tamin'ny Huawei P30 Pro:
Amin'ny fitaovana roa, araka ny hitanao tao amin'ny galeriana, manana fampisehoana mahatalanjona izahay, na izany aza. Ny Huawei P40 Pro dia milalao amin'ny "ligy iray hafa" mikasika ireo fitaovana rehetra eny an-tsena. Raha ny momba ny fandraisam-peo dia azonao jerena ny fanatsarana ny fanamafisana sy ny tifitra ao amin'ny andrana horonantsary etsy ambony.
Fizarana haino aman-jery sy fifandraisana
Ny efijery dia iray amin'ireo lafiny mamaritra ihany koa, Ny OLED an'ny Huawei P40 Pro dia tsy nitombo kely fotsiny, fa nahazo ny diplaoma manaraka ny vahaolana Ary ankoatra izany, dia mahita a Tahan'ny famelomana 90Hz izay, na dia tsy iray amin'ireo avo indrindra eny an-tsena aza, dia manome fampisehoana ambony noho ny P30 Pro. Amin'ny lafiny feo, samy misy stereo izay misy mpandahateny ambony miafina ao ambadiky ny efijery, ny P40 Pro dia nahazo hery sy mazava. .
Huawei P40 Pro: OLED 6,58 - vahaolana QHD + amin'ny 90Hz
Huawei P30 Pro: OLED 6,47 - FHD + vahaolana amin'ny 60Hz
Amin'ny lafiny fifandraisana, fahasamihafana lehibe iray hafa. Ny chip vaovao fifandraisana dia nitaingina Ny Huawei P40 Pro dia tsy vitan'ny hoe mampiditra fifandraisana 5G fotsiny, fa miaraka amin'ny kinova WiFi 6 vaovao Manolotra fampisehoana iray izay avo telo heny noho ny hafainganam-pandehan'i P30 Pro, araka ny hitanao tamin'ny horonan-tsary fampitahana.
Fahaleovan-tena, izay mamirapiratra koa Huawei
Tamin'izany fotoana izany, ny Huawei P30 Pro dia iray amin'ireo fitaovana manana fahombiazana tsara indrindra ao anatin'ny faritra avo lenta izay afaka nanolotra tamin'ny resaka fizakantena. Na izany aza, ity Huawei P40 Pro ity dia mandova ny toetra mampiavaka ilay teo aloha: 4.200 mAh miaraka amina famahana haingana 40W tafiditra ao anatin'ny vokatra, ary koa famahanana finday haingana sy miverina. Izany dia tokony hanondro fa ny P40 Pro dia tsy hanolotra fizakantena firy, manana 5G isika, WiFi tsara kokoa, misy vahaolana kokoa, famelombelona kokoa ... maninona no
Amin'ireo fitsapana farany azonay dia nahazo fampisehoana mitovy amin'izany izy ireo, ny Huawei P30 Pro dia mahazo efijery 35 minitra mihoatra ny P40 Pro, izay toa tsy dia hainay loatra raha jerena ireo andinindininy voalaza etsy ambony, ka ny Huawei P40 Pro dia manohy mametraka ny refy amin'ny resaka fizakan-tena.
Ny teboka iray mamaritra indrindra eto dia ny rindrambaiko, Tsaroanay fa ny Huawei P30 Pro dia iray amin'ireo fitaovana farany mbola manana Serivisy Google, fa tsy ny P40 Pro izay manana Huawei Services, zavatra iray izay tsy maintsy raisinao.
Vidio ny Huawei P30 Pro amin'ny 631 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Fampitahana: Huawei P40 Pro VS Huawei P30 Pro Mendrika izany ve?
Navoaka tao amin'ny Netflix, Disney + ary HBO tamin'ny volana aprily
Ny rafitra fitehirizana rahona maimaimpoana tsara indrindra